Gịnị mere na ị chọrọ ka ọ dịrị otú gị android gị TV | mirror android ekwentị
Gịnị mere Ị Chọrọ mirror Your Android Gị TV?
A afọ iri gara aga, echiche na ị ga-achọ ka ọ dịrị otú ihuenyo nke ekwentị mkpanaaka gị gị telivishọn ga-iyi-enweghị isi na ma ugbu a na e nwere nke ukwuu ọdịnaya na anyị mobile ngwaọrụ site na egwuregwu na-HD video, ọ bụ ihe bara nnọọ uru na ịfụ gị na ekwentị obere ngosi na telivishọn size. Na-agụ na ka anyị na-egosi gị otú. Dị ka na fọrọ nke nta ọ bụla tech na-agba mbọ nsogbu e nwere otutu-abịaru nso ka nsogbu nke na-ọdịnaya anya gị Android ekwentị na jidesie gị HDTV. Ị nwere ike iji Chrome nkedo ichupu fim, foto, na a dum ọtụtụ ndị ọzọ. Ị pụrụ ọbụna iji a Miracast dongle na gị Android 4.2+ ekwentị na-ejighi eriri yiri gị Android ekwentị
N'agbanyeghị uku Chrome nkedo bụ maka nkwanye media ọdịnaya na na Miracast-enye (dịtụ ejighị n'aka) na ihuenyo mirroring, n'ebe ahụ bụ otu ihe ha na-eme adịghị (na ike) enye: ndị kwụsiri ike na bandwit nke a Wired njikọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ zuru okè mirroring na incredibly ala latency, ọ dịghị ize ndụ nke wireless nnyonye anya ma ọ bụ dropouts, àgwà ụda mmeputakwa, na na mma nke iji ihuenyo mirroring n'ebe ọ bụla e nwere ihe HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri, mgbe ahụ, ị ​​ga mkpa a Wired njikọ n'etiti ekwentị gị na gị ngosi .
Part m: mirror gị android ekwentị gị TV na USB.
Ozugbo ị gosikwara na ekwentị gị na-akwado MHL, naanị ihe ị ga mkpa bụ ihe MHL USB maka ekwentị gị. Nke a bụ, site nnọọ na, ndị kasị tricky (na nwere na-akụda mmụọ) akụkụ nke dum usoro. Ozugbo ị nwere ikike USB ọ bụ gara, ma ọ bụrụ na ị na-azụ ihe na-ezighị ezi USB maka ngwaọrụ gị ị na-aga nwere n'ezie ọjọọ oge. Iji nyere gị aka izere obi nkoropụ, ka na-a anya na ihe na-eme ka dị iche iche MHL cables kedi na otú họrọ nri otu. E nwere ugbu a atọ MHL USB ụdị na ahịa. Mbụ ụdị a maara dị ka Standard Micro-USB na-HDMI nkwụnye na nwere 5 atụdo na Micro USB njikọ. Nke a bụ USB ụdị ji kasị MHL ngwaọrụ. Nke abụọ Ụdị bụ Samsung Micro-USB na-HDMI nkwụnye na nwere 11 atụdo na Micro USB njikọ. Nke a bụ USB ụdị ji kasị Samsung ngwaọrụ (ọ bụ ezie na a ole na ole nke ha ngwaọrụ eji 5-pin ọkọlọtọ).
N'ikpeazụ, e nwere ihe a maara dị a n'ezinụlọ MHL USB. Na mgbakwunye na pin ụdị si ndepụta n'elu, MHL nkwụnye-abịa n'ezinụlọ na-arụsi ọrụ ụdị. Arụsi ọrụ ike Gịnị, dị ka ndị anyị kwuru na aga na paragraf, na-agụnye a kwadoro nkwụnye nke atọghata MHL ọkọlọtọ ka larịị ochie HDMI mere na ị pụrụ ikwunye gị MHL-nyeere ekwentị n'ime ihe ọ bụla telivishọn, projector, ma ọ bụ erite na a free HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri. N'ezinụlọ MHL cables anaghị agụnye-arụsi ọrụ ike mgbaàmà mmegharị na-zubere maka ojiji n'etiti ihe MHL-nyeere ngwaọrụ na MHL-nyeere ngosi. Ọ bụ ezie na ha enweghị ihe mmezi USB maka odori ha ka ga-enye ike mmasị ngwaọrụ dị ka MHL cabling ọkọlọtọ na-agụnye ike nnyefe mgbe USB na-paired n'etiti abụọ MHL-nyeere nkeji.
N'ozuzu anyị na-apụghị ikwu ịzụta a n'ezinụlọ MHL USB maka ngwaọrụ gị dị ka ọ na idiọk egbochi gị. E nwere nnọọ ole na ole Android ngwaọrụ na MHL nkwado na ahịa ma ọnụ ọgụgụ nke MHL-nyeere ngosipụta bụ kama obere. N'ezie Ohere nke ị dị nnọọ na-eme n'elu MHL-nyeere ngosi mgbe burugodị na gị MHL-nyeere ekwentị na n'ezinụlọ USB ndị dịtụ ebughibu. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ịzụta ihe USB iji isi n'ụlọ (na-enwe ihe MHL-nyeere TV) ọ na-eme nnọọ nta uche ịzụta a n'ezinụlọ MHL USB na na-arụ ọrụ na họrọ ngosipụta mgbe ị pụrụ ịzụta a N'otu aka ahụ ọnụ na-arụsi ọrụ MHL nkwụnye na ga-arụ ọrụ ọ bụla HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla na ngosi.
Part II: Olee otú iji yiri gị android gị TV site Ikuku?
Roku si na-eto eto nhọrọ nke nkwanye ngwaọrụ bụ perennial ọkacha mmasị n'etiti ndị nlebanye anya na-eji ọkụ myiri. Gịnị n'ezie na-eme ka Roku ada bụ ya mkpari nhọrọ nke ngwa, nke ugbu a nọmba karịrị 1,000. Ọ bụ n'ihi na nke ndị niile ngwa na Roku ibido mere anyị na ndepụta. Otú ọ dị, mgbe ndị Roku usoro bụ ogologo enwekwaghị ọ bụla ezigbo nwaafo mirroring, ụlọ ọrụ mara ọkwa October 2 nke 2014 na ya Roku 3 na Roku gụgharia Stick (HDMI) ga-ugbu a na-enye ogologo-elu ihuenyo mirroring maka Android.
Mgbe a zuru ndepụta nke dakọtara ngwaọrụ e mara, beta ọrụ dị ka Android na-agba ọsọ 4.4.2 nwekwara ngwaọrụ gị ga nwere WiFi njikọ na ya iji na-eme na ihuenyo mirroring na ọ ga-enwe ndị ọhụrụ software nke android-agba ọsọ na ya site na jelii agwa ka KitKat nakwa Lollipop nke bụ ọhụrụ femụwe nke bụ ntọhapụ a ọnwa ole na ole gara aga. Ndị mara ọkwa na-ekwukwa na gị "ngwaike ga na-akwado na ihuenyo mirroring," na ọtụtụ ngwaọrụ-eme otu ụdị ma ọ bụ ọzọ
Ego na ngwaọrụ gị emeputa n'ihi na ụfọdụ ntụziaka na-esi nwee ihuenyo mirroring maka ngwaọrụ gị.
-Go Na Ntọala menu
- Kpatụ njikọ
- Kpatụ ihuenyo Mirroring
- Gbaa mbọ hụ na ihuenyo Mirroring set ka NA
- Mgbe Doppler, enweta Roku wireless ngosi depụtara
- Dialogue na-egosi na ngwaọrụ na-agbalị jikọọ Roku
- Ozugbo ọ jikọọ mgbe ahụ ngwaọrụ gị ga-amalite na-yiri na gị TV ihuenyo.
Ụzọ ọzọ na-gị android ngwaọrụ dakọtara mere na ọ pụrụ enye ohere gị mirroring na gị TV bụ site dịrị ngwaọrụ gị mgbe gị na android ngwaọrụ e gbanyere mkpọrọgwụ a na-enye ohere na ekwentị gị ka inwe ya zuru nwere ma site dịrị gị android ngwaọrụ nke a uche-enye gị ohere breeki na akwụkwọ ikike nke ekwentị gị, usoro ihe omume na ike ga-eji na-kwụsịrị gị android bụ Kingo Android dịrị software a usoro nwere ike iji na kwụsịrị ọ bụla android na ngwaọrụ na a maara, mgbe gị na ngwaọrụ e gbanyere mkpọrọgwụ ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ dakọtara na mirroring tupu mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ibudata mirroring ngwa na ekwentị gị, site na dịrị ngwaọrụ gị na ngwa ga-dakọtara na ekwentị gị ma ị nwere ike ịgbanwe ya ụzọ ị chọrọ ka ọ bụrụ.
> Resource> emulator> Gịnị mere Ị Chọrọ mirror Your Android ka TV?